Safiirka Qatar ee Soomaaliya oo maanta tegay Kismaayo (Ogow Ujeedkiisa +SAWIRRO) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Safiirka Qatar ee Soomaaliya oo maanta tegay Kismaayo (Ogow Ujeedkiisa +SAWIRRO)
Kismaayo (Halqaran.com) – Safiika dowladda Qatar u fadhiya Somaaliya Xasan Xamza ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubbaland.
Madaxweyne ku-xigeenka koobaad Jubbaland, Maxamuud Sayid Aadan iyo xubno ka mid ah golaha wasiiradda Jubbaland ayaa safiirka ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Sayid Maxamad Cabdulle Xasan ee magaalada Kismaayo.
Warbaahinta Jubaland ayaa sheegaysa in Safiirku uu xariga ka jarayo mashaariic horumarineed oo ay dowladda Qatar Jubbaland ka hirgelisay inta uu ku sugan yahay magaalada Kismaayo.
Wararka qaar ayaa sheegaya, in Safiirka uu sidoo kale halkaasi u tegay arrima siyaasadeed, inkastoo aysan jirin cid si rasmiya u xaqiijisay wararkaasi hoose.
Maamulka Jubbaland iyo DF Soomaaliya ayaa waxaa ka dhaxeeya Khilaaf adag, waxaana la hadal haayaa arrimahaasi inuu u tagay safiirka Magaalada Kismaayo.